Home » Facebook » ကျွန်တော်ကသူခိုး သူကလူဆိုး
Posted by koyin sithu on Jun 5, 2015 in Facebook, Think Different | 13 comments
ကျနော် ဘာခိုးရမလဲ ဟင်
-ပို့စ်ဖတ်ရသလောက်က..ပဆံမရှိလို့ ဆန်ခိုးစားရတဲ့ ဆင်းရဲသားတစ်ယောက်
-ကိုယ့်တိုင်းပြည် အခြေအနေနဲ့ ယှဉ်ကြည့်ရင် အများကြီး ကောင်းနေသေးတယ်လို့ ခံစားရတယ်
ရွှေအိ မန့်လေး အပေါင်းပေးသွားတယ်။
ချွီချွီခင်ဇော့် မန့်လေးကိုလည်း အပေါင်းပေးသွားပါ့မယ်..။
.ခိုးမစား၊ တောင်းမစားနိုင်လို့ အစိုးရအလုပ်ကထွက်ခဲ့တာ…
နိုင်ငံသားတစ်ယောက်ဟာ သူ့အစိုးရ သူ့နိုင်ငံဟာ ကိုယ့်မိဘအရင်းလိုပဲ
ကျောင်းတုန်းက စက်ရုံဆင်းတော့ တွေ့ခဲ့ရတဲ့ စီနီယာကြီးကတစ်ယောက်က….
ပြသနာတစ်ခု မှာဆိုပါတော့ …
ငွေဝင်တဲ့ဌာန ကြီးတစ်ခုမှာ ခွဲတမ်းပေးတာကို မယူမိလို့
ပြောရမယ်ဆိုရင် ကျနော်တို့ ရွှေနိုင်ငံတော်ကြီးမှာ ဝန်ထမ်းဆိုတာ မသေရုံ လစာလေးတွေနဲ့ ရုန်းကန်လှုပ်ရှားရင်း စိတ်သောကတွေ ပင်လယ်ဝေနေရသူတွေပါ။ သားသမီးတွေရဲ့ အနာဂတ်ဆိုတဲ့ အဝေးဆီက ပန်းတိုင်ကိုအသာထား၊ မနက်ဖြန်အတွက် ဈေးဖိုးခက်နေကြရတယ်….
ကျနော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပြည်သူက မကြိုက်မနှစ်သက်တဲ့ လူဆိုးတွေ အဓမ္မအုပ်ချုပ်တာကို နှစ်ပေါင်း ၅၀ ကျော် (ရာစုနှစ်ထက်ဝက်ကျော်) ခံနေကြရတယ်။
အဲ့ စကား ဖြစ်လာအောင် လုပ်ခဲ့ ပြောခဲ့သူတွေကိုပါ ဆဲပစ်သင့်…
အခု လောလောဆယ် ရွှေပြည်က သူကြွယ်များ ခိုးနေလို့လား။ နော။
ခုခေတ် ကခိုးစရာမလို စာပွဲအောက်က ပိုက်ဆံဘဲလိုပါသည်